Manahirana ny olona - L'Hebdo de Madagascar
Manahirana ny olona
Ny mpitsabo sy ny mpiasa hiasa amin’ny orinasa afakaba ihany no tsy misy tolotra raha ho an’ny « Agence Mitsinjo » etsy Ankadifotsy Befalatanana manokana. Fampihaonana sy manatrika ihany no ataon’ny orinasa fa tsy miditra amin’ny ady varotra karama eo amin’ny roa tonta. Mitovy amin’ny karama iray volana no sanda alain’ny « Agence Mitsinjo » ho an’ny mpampiasa mitady mpiasa fa maimaim-poana kosa ho an’ny olona mitady asa.
Mijoro ara-panjakana ary ny minisiteran’ny Asam-panjakana sy ny asa ary ny lalàna sosialy no mpiahy ireny orinasa mikarakara ny fampihaonana ny mpitady asa sy ny mpanome asa na « agence de déplacement » ireny. Tsy misy ny fikambanana iraisan’izy ireo fa samy mifaninana ny hampalaza sy hampisongadina azy avy ny tsirairay.
Natao hanampiana ny olona sahirana mitady asa sy hitadiavana mpiasa ny fijoroan’ny « agence de déplacement » fa tsy natao fakana tombony. Maimaim-poana ho an’ny mpitady asa. Mandoa sanda mitovy amin’ny karama iray volana ho an’ny mpampiasa nahazo mpiasa hiasa any aminy.
Niorina tamin’ny novambra 2010 ny « Agent de placement Mitsinjo » etsy Ankadifotsy Befelatanana izay orinasa fanampiny na « annexe » raha eny Soarano no foibeny. Nanahirana ny nampahafantatra ny fisian’ny orinasa teny Ankadifotsy. « Niainga tamin’ny tsy nisy fa ny finoana no natao betsaka. Tsy mora ny nampahafantatra ny orinasa, tao anatin’ny taona voalohany », hoy Rakotondrabe Lalaina Henin-tsoa na Aina, tompon’andraikitra voalohany ny « Agence Mitsinjo ».
Ny fotoam-pamadihana sy ny fetin’ny Krismasy ary ny Taom-baovao no mihiisatra ny tolotry ny fitadiavan’asa sy ny mpampitady asa. « Tao anatin’ny maitso ahitra no nisokafan’ny orinasa. Nivoaka sempotra vao nahadingana ny taona. Ankehitriny, azo lazaina fa maro no tonga manatona anay eto. Misy olona ambony teto amin’ny firenena ka hatrany amin’ny mpiasa madinika. Basy mamahan-tena ny orinasa ka ny mpampiasa mitady mpiasa ihany no hany fidiram-bola. Hatreto, manomboka fantatry ny olona ny orinasa na ao anatin’ny fotoam-pamadihana aza isika izao », hoy hatrany i Aina, tsy kivy rehefa tafiditra ao anatin’ny vanim-potoana tsy mampandeha ny tsena.
Hatreto, ny fampihaonana ny mpitady asa sy ny mpampiasa mitady mpiasa no hataon’ny « Agence Mitsinjo ». Manatrika sy vavolombelona ny adivarotra ataon’ny roa tonta fa tsy miditra amin’ny fifandresen-dahatra amin’ny karama ny « Agence Mitsinjo ». Mandrotsaka ny karama iray volana amin’ny adivarotra hifanaovan’ny roa tonta ny mpampiasa vantany vao raikitra ny fifanarahana. Ho an’ny mpiasa an-trano manokana, manatitra ny mpiasa any an-tranon’ilay ho mpampiasa azy ny « Agence Mitsinjo », ho fisorohana ny mety fisian’ny olana, toy ny fitsoahana na fangalarana na ny fanaovana toetra tsy zaka amin’ny mpiasa. « Manana zo manova mpiasa an-trano indroa ny mpampiasa iray raha toa ka tsy mety aminy ny teo aloha sady maimaim-poana », hoy Rakotondrabe Lalaina Henintsoa na Aina, mitanisa ny olana efa nosedrainy, tao anatin’ny fotoana nijoroan’ny orinasa kanefa nahitany vahaolana hatrany.
Manana fianakaviana mipetraka eo Antananarivo ny olona avy any amin’ny faritra vao afaka raisina ny taratasiny. Toy izany ihany koa ho an’ny olona raha handeha ho an’ny amin’ny faritany mba hisorohana ny fitsoahana raha sendra misy ny tsy fifanarahana. « Arakaraka ny tranga no hitadiavana vahaolana sy hahazoana traikefa mba tsy hiverenen’ny olana iray iny intsony amin’ny manaraka », hoy hatrany i Aina, mampiseho fa voafehiny ny seraseran’ny asa.
Mahazo fihenam-bidy ireo mpampiasa maka mpiasa mihoatran’ny roa tonga ao amin’ny « Agent Mitsinjo ». Hakana fepetra manokana kosa ireo mpampiasa mampijaly na kizitina amin’ny mpiasany samihafa aorian’ny fitarainana ataon’izy ireo. Hahitsy sy toroana hevitra ary hanarina kosa ny mpiasa hanaovan’ny mpampiasa fanakianana toy ny mangala-pihinana raha ho an’ny mpiasa an-trano. Misy hatrany ny laharana hifandraisan’ny « Agence
Mitsinjo » amin’ireo olona nitady asa na mpampiasa nitady mpiasa tao amin’
ny alalan’ny laharana 034.45.683.04 na 033.17.621.02.
Ankehitriny, lasa miahiahy ny olona, amin’ny « Agence de déplacement », taorian’ireny fandefasana olona hiasa an-tsokosoko tany ivelany ireny. Anisan’ny nampihena ny tsenan’ny asa izany.
Jamba mihira – Mahita ny hoaviny
Mpivady niara-maty – Nifanelanelana ora folo ny nandaozin’izy mivady ny tany